Adalata Mgbanwe: Gini bu ebum n’uche? | Martech Zone
O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala na blọọgụ anyị na ọ bụrụ na òké gị pụọ na peeji ahụ ma chee ihu na adreesị adreesị (na ị debanyeghị aha), na ngalaba ndenye aha na-egosi. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma… na anyị amụbawo anyị nnweta mgbalị nke ndị debanyere aha si Ọtụtụ narị kwa ọnwa. A maara nke a dị ka ọpụpụ ebumnuche.
Ibiaghachi Exchange nwere patenti Wepụ-Ebumnuche teknụzụ nke na-ahụ mmegharị ahụ, oke oke, ebe oke ahụ, na ma ọ na-agbaji ụgbọ elu nke ihe nchọgharị ahụ iji kọwaa ma ebumnuche gị bụ ịhapụ weebụsaịtị.
Tupu onye ọrụ enwee ike ịhapụ saịtị ahụ, pane pụtara na-adọta ma jigide onye ọbịa ahụ. Nke ahụ bụ ebumnuche ọpụpụ bụ na ọ dị irè!
Tags: ịgbahapụihe nchọgharịỤzọ ọpụpụọpụpụ mgbanweọpụpụ ebumnuchemmegharị ahụoke oke
Feb 21, 2014 n’elekere 9:09 nke abali
M na-eche ka ha si mee ihe ọ bụla ma ọ dịkarịa ala site na 2008 (ha tọrọ ntọala 2010). Nke a sitere na Septemba 18, 2008: http://www.warriorforum.com/main-internet-marketing-discussion-forum/13369-how-do-you-make-unblockable-exit-popup.html - site na post banyere ụzọ ọpụpụ-ebumnuche popups: “… Kacha nso i nwere ike inwe bụ ebe gị esenowo si òké cursor na-akpụ akpụ dị nso na elu nke ihuenyo… otú ị na-anya isi na ha na-aga pịa nso bọtịnụ. Nke a bụ m unblockable ụzọ ọpụpụ popup: Action PopUp: Ntị-Jidere Unblockable PopUps Mgbe gị ọbịa na-ahapụ Page… ”.
Na mgbakwunye, enwere koodu a site na Eprel 27, 2012 nke na-emejuputa teknụzụ 'ọpụpụ-ebumnuche' n'ihe dị ka usoro 5 nke koodu, dị maka ọha na eze: http://stackoverflow.com/questions/10357744/how-can-i-detect-a-mouse-leaving-a-page-by-moving-up-to-the-address-bar
Ha debanye ụbọchị nke patent ha bụ Ọkt 25, 2012. datebọchị mbu dị ka Google si dị bụ Eprel 30, 2012 (http://www.google.com/patents/US20130290117)
Akwụkwọ ọzọ sitere na ngwa ngwa: http://www.quicksprout.com/forum/topic/bounce-exchange-alternative/ Biputere: “N’afọ 2010 ka emepụtara ScreenPopper.com n’azu mini-van n’okporo ụzọ dị ogologo njem nke 1.5 afọ gburugburu mba ahụ n’ihi na enweghị m ike ịchọta ihe m chọrọ. Enweghị asọmpi, n'oge ahụ naanị onyinye bụ popup domination nke siri ike ma sie ike ịwụnye ”. Nke a bụ afọ 2 tupu edere 'patent' ahụ.
Ikwubi Bounce Exchange nwere ike ịnwe nnukwu ngwaahịa mana ha echepụtaghị ya na ha enweghị ikike na “teknụzụ”. M na-eche ka patent ọka iwu ha achọtaghị ihe m nwere ike ịhụ n'ihe dịka 5 nkeji na Google. Ma abughi m onye ọka iwu. Naanị onye na-enweghị mmasị na ya na-anwa ịmekọrịta ihe na-abụghị nke ha. Ha na-ewere $ 3000- $ 5000 maka ya ma achọghị ndị ọzọ, ọnụ ala ngwọta ịdị adị (gịnị ọzọ ka ị chọrọ a "nchọpụta ikike"?)
Feb 21, 2014 n’elekere 11:55 nke abali
Agụghị m patent ahụ n'ezie mana m ga-asị na patenti apụtaghị n'ezie na ị mepụtara ihe. Can nwere ike imeziwanye atụmatụ na patent na mmelite ahụ.
Feb 21, 2014 na 12:46 PM
Ndewo @douglaskarr: disqus - Agụrụ m paragraf abụọ nke 1 nke patent na nke a na-adịghị ahụ anya (na njikọ dị n'elu) na isi okwu nke patent ahụ bụ teknụzụ 'ọpụpụ-nzube'. Ha na-ekwu na ha mepụtara nsuso oke maka nzube a. Njikọ m wetara gosiri na ha echepụtaghị ya ma ọlị. Nke ahụ bụ ihe dị njọ n’echiche m. Ma ọ annoys m n'ihi na m na-eche echiche na-eme ka ụzọ ọpụpụ-uduak edemede onwe m, ma ọ bụ iji otu n'ime ọtụtụ njikere mere uzo ozo (M hụrụ ọ dịkarịa ala 15 uzo ozo…). Ọ bụrụ na Bounce Exchange patent ga-eji ha iji gbochie, na-ezighi ezi, asọmpi ọ nwere ike imerụ weebụsaịtị niile dị ugbu a jiri ndị ọzọ dị ọnụ ala; na ndị dị ka m na-achọ iji ya. Ugbu a ka m hụrụ edemede gị, enwere m echiche 2nd. Enweghị ohere m ga-eji ọtụtụ puku dọla kwa ọnwa maka nke ahụ. Ma ọ bụrụgodi na ha ekwesighi ka ikike patent ahụ, ha nwere ike ịme m nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na m eme ya n'onwe m, ma ọ bụ jiri ndị ọzọ.
N’oge na-adịbeghị anya, m na-ahụ ụdị popups n’ebe niile. Na-enweghị mpụga ebumnuche popups anyị ga-achọ ịlaghachi na popups ndị ọzọ na-akpasu iwe - pop-unders, pop-overs n'oge, ntinye-popups, wdg
Nov 26, 2015 na 3:31 PM
Yabụ, ọ dị ka Retyp, ndị nọ n'azụ Optin Monster gbara Bounce Exchange ebubo na ikike a. Ma amaghi m ihe zuru ezu banyere iwu iji ghọta ma ọ bụrụ na edozila ya, ma ọ bụrụ na ọ dị, kedu ihe nsonaazụ ya bụ…? Ozi ndị ọzọ na njikọ ndị a:
Ọ ga-adị mma ma ịmara ihe na-eme ebe a. O yiri ka o bu ihe nzuzu na nzuzu ma acho m ihu ihu ebe a see.
Nov 27, 2015 na 4:42 PM
Nke ahụ mara mma na-adọrọ mmasị Teyva. Ekwenyere m…
Jun 30, 2016 na 5:46 AM
Ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ BounceX na-ere (na BounceX / Yieldify bụ ọrụ zuru oke dịka ha bụ ngwaahịa) na-enwekarị ọtụtụ ihe. Ọ naghị ekwe omume ịmegharị usoro niile, yabụ ị na-echedo isi (na nke a algo) n'ihi na ọ bụ akụkụ kachasị mkpa. Ekwenyesiri m ike na enwere ikike dị na ya maka imepụta onyonyo, na-ese onyinyo na webụsaịtị wdg na ha enweghị ma na-emebi iwu.
Ọ dị mma ịmara na Yieldify (onye na-agbachitere n'okwu ahụ) zụrụ ikike nchọpụta sitere n'aka ndị ọzọ ma na-agba BounceX ikpe ugbu a. Ọ bụrụ na ịnwere ego ịchụso onye asọmpi mgbe ahụ enwere obere ihe egwu - ọ bụrụ na ị tufuo ikpe ị nọ n'otu ọnọdụ ị nọ ugbu a (wepu ego) ebe ọ bụrụ na ị merie mgbe ahụ, ị ​​ga-emepụta akụkụ ahịa kerịta onwe gị.